Mayelana NATHI - Shenzhen Sinsche Technology Co., Ltd.
Abasebenzi bethu abaqeqeshiwe kakhulu banolwazi lweminyaka eminingi emkhakheni we-Industrial Science, Analytical Chemistry kanye ne-Engineering. Kusuka eNdlunkulu yethu Yamazwe Ngamazwe eShenzhen Guangdong, sinikeza ukuThengiswa Komhlaba Wonke Nokusekelwa Kwezobuchwepheshe, iLebhu Yokucwaninga Nentuthuko, Izinsiza Zokuqeqesha, Ukukhiqiza Nezindawo Zokugcina Izitolo. AmaHhovisi Esifunda kanye nama-Exclusive Agents nawo akhonjwe futhi akhethwa ukunikeza ukuqeqeshwa kwasendaweni, ukwesekwa kwezobuchwepheshe kanye nokuthengiswa kwezifunda.
E-Sinsche, silwela amazinga aphakeme kakhulu ngomzamo wokweqa okulindelwe amakhasimende ethu. OkwethuI-ISO9001: 2015 Isitifiketi siqinisekisa ukuthi sizibophezele kwikhwalithi nokuphepha kwemikhiqizo yethu, siqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu ilethwa iphelele, ifike ngesikhathi, futhi inamanani ancintisanayo, futhi ekugcineni, iqinisekisa ukuthi ngeke sishaywe ekuhlinzekweni kwamakhasimende, ukuqeqeshwa komkhiqizo kanye nokuqhubeka ngemuva kokuxhaswa kokuthengisa .
Umsebenzi wethu: Ukuqinisekisa ikhwalithi yamanzi kubantu emhlabeni jikelele.
Kusuka endlunkulu yethu eChina siphatha inethiwekhi yomhlaba wonke yezikhungo Zezentengiso, i-R & D, Ezokukhiqiza Nezokusabalalisa ukuklama, ukuthuthukisa nokwenza imishini esezingeni eliphakeme yokuhlaziya amanzi.
Sinikeza isisombululo se-turnkey kuzo zonke izidingo zakho zokuhlaziya nezokuqapha, futhi sisebenzisa ithimba lethu lochwepheshe abazinikele sizosebenzisana nawe ukuqonda izidingo zakho, sinikeze isixazululo futhi silandele ukusekelwa kwekilasi lokuqala njengoba usidinga nalapho usidinga.
Uphenyo lwethu nokucwaninga kwethu ekuhlaziyweni kwamanzi kuholele ekwakhiweni kwemishini ephathekayo, yeLabhorethri neye-inthanethi yokuhlola ngokunembile imingcele ehlukene etholakala emanzini.
Ukutshalwa kwemali okuqhubekayo kubasebenzi bethu bezocwaningo nentuthuko kanye nezinsizakusebenza kuqinisekisa ukuthi sihlala sisezingeni eliphambili lobuchwepheshe emkhakheni wethu.